Mpanamboatra sy mpamatsy Africa Apricot | Heritage
Ny apricot mena vaovao dia avy ao amin'ny tanànan'i Baoding, faritanin'i Hebei, noho ny tsiro malefaka sy mamy ao aminy.
Ny loko volontsôkôlà an'ny voankazo masaka dia miova ho volomboasary maivana aorian'ny sulphured. Manintona anao kokoa io.
Ny lozisialy Heritage dia mampiasa apricot avo lenta amin'ny alàlan'ny fandrobana mangatsiaka amin'ny siropan'ny maripana ambany, hiantohana ny asidra sy ny tsiro manitra manokana sy miavaka. Fonosina vovoka siramamy kely, matsiro ary tsy mifikitra.
Maharitra hafiriana ny apricots maina?
Tadidio fa azonao atao ny mitazona azy ireo ao amin'ny pantry na vata fampangatsiahana mandritra ny 6 ka hatramin'ny 12 volana. Raha manafoana azy ireo ianao dia afaka maharitra anao mandritra ny 12 ka hatramin'ny 18 volana izy ireo. Ny zava-dehibe tokony hotadidina dia ny fitahirizana apricots maina amin'ny faritra maina sy mangatsiaka. Mba hampitomboana ny fiainana talantalana apricots maina aorian'ny fisokafana dia apetraho ao anaty kitapo plastika mavesatra na ao anaty kaontenera mihidy mafy.
Torohevitra fitehirizana iray hafa dia ny manangona apricots amin'ny habetsaky ny 'haben'ny sakafo' alohan'ny hitahirizanao azy ireo ao anaty vata fampangatsiahana. Rehefa manao an'io ianao dia mamoaka izay ilainao isaky ny mandeha. Io dia mamela ny apricots anao maina hahatratra ny hafanan'ny efitrano haingana ary hitazona ny ambin'ny voankazo maina tsy ho avoaka sy hotehirizina. Ny fitehirizana ny apricots tsirairay dia hahazoana antoka fa tsy manakatona na manokatra fitoeram-bokatra ianao, izay ahafahan'ny rivotra miditra sy manafaingana ny fizotran'ny fanimbana sy ny famolavolana.
Ny apricots dia sady mahasalama no matsiro, ary samy hafa ny mahasoa ny apricots. Rehefa mitahiry apricots maina ianao dia misy tombony fanampiny - mora ny fanamainana ary mora tehirizina.
Ny orinasanay dia namatsy voankazo maina China, voankazo voatahiry, amin'izao fotoana izao ny vokatra dia amidy eraky ny eto an-toerana sy any ivelany noho ny fanohanan'ny mpanjifa mahazatra sy vaovao. Manolotra vokatra avo lenta sy vidin'ny fifaninanana izahay, tongasoa ny mpanjifa mahazatra sy vaovao miara-miasa aminay!
Teo aloha: Peach mavo
Aprikotika maty rano
Africika maina lavenona
Aprikotika maina maina
Mitahiry Aprikotika maina